ससुरा बा लाई चिठी - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » Fun , नेपाली खित्त्का , साहित्य » ससुरा बा लाई चिठी
ससुरा बा लाई चिठी
आदरणीय ससुरा बा जधौ,
हुन त छोरी दिन मन नलागेको केटाले सिधै ससुरा बा भन्दा झनक्क रिस उठ्यो होला है हजुरलाई? हजुरले जे सोचे नि, मैले हजुरकी छोरी नै ब्या गर्ने निधो गरीसक्या छु र हजुरकी छोरी डल्लिले पनि “बा आमाले जे सुकै भनून्, म त तिमी संगै ब्या गर्ने हो” भनेकी छिन्। त्यही भ’र मैले त हजुरलाईनै ससुरा बा स्विकार्न थालिसकेको छु। छोरी राम्रै हिसाबले दिनु भएछ भने ठिक्कै छ, नत्र हाम्रो कुरो छदै छ।
ल्या, सन्चो बिसन्चो त सोघ्नै बिर्षेछु, आरामै छ नि, हैन?? अनि सासु मा को बाथले घुँडा खूब दुख्च रे भन्ने सुन्या थे, अहिले कस्तो भ’को छ कुन्नि? कहिले कही त सासु माको कर कर कर कर सुन्दा झर्को लाउँदो हो है हजुरलाई पनि। अनि सालो केटो पनि खूब बरालिँदै हिँडेको छ रे भन्ने सुनेको छु। पिर नगर्नु होला, हजुरकी छोरीसँ ब्या गर्ने बित्तिकै सालो केटालाई अरप तिरको एउटा भिसा जसरी भए नि झार्ने छु। तै’नि यता आए पछि सुध्रिन्छ कि??
नेपालमा छोराहरू अरप तिर आउनेका बाउ आमालाई छोरो फिलिपिनो केटीसँ लागेर बिग्र्यो कि भन्ने साह्रै त्राहि त्राहि हुन्छ अरे। हजुरले पनि मलाई त्यही नजरले हेर्नु भ’को भएर छोरी दिन गाह्रो मान्नु भएको हो भने, धरोधर्म, बिध्यानस्ट, मैले त्यस्तो केही गर्या छैन। किन हो किन, यो फिलिपिनो भन्ने बित्तिकै मेरो त दिमाग तातेर आउँछ। हजुरकी छोरी डल्लिले के मोहनी लगाई लगाई, त्यस्लाई बाहेक अरू कसैलाई सोच्न पनि मन लाग्दैन।
यती भनि सक्दा हजुरले बुझी सक्नु भो होला, हामी दुई बीचमा कस्तो डिप लप पर्या रछ भनेर। यो बुढेसकालमा आएर हामी जस्तो जोडीलाई छुट्याउन हजुरको मन छ भने, म राम राम मात्र भन्न सक्छु काँध थाप्न सक्दिन।
हजुरको मनमा यसले आज किन यस्तो चिठी लेख्यो भन्ने कुरा खेलीरा’ होला है। वास्तवमा कुरा के भने नि, आज नुहाउँदै थिए, बाथट्युवमा पानी बल्क भयो, के भयो भनेर यसो हेरेको त, अलि अलि कपालका रौ देखेँ। अनि अल्लि खोतल खातल पारेको त मेरा बाबैssssssss!!!!! ड्रेनेजको प्वाल त पुरै रौँले भरिएको रहेछ। अनि हत्त पत्त किचनेमा गएर काटा ल्याएर प्वाल खोतलेको त गतिलो एक मुठी कपाल निस्क्यो। अनि एैनामा गएर आफ्नै तालु हेरेँ, तालु त भर्खर धान रोपेको खेत जस्तो देखिएको रहेछ। मलाई साह्रै पिर पर्यो। पिर यस अर्थमा पर्यो कि यसै त हजुरले छोरी दिन गाह्रो मान्नु भ’को छ त्यही माथि यो तालु यस्तरी खुईलिदै गयो। हुन त उमेर संग-संगै धेरै जसोको तालु खुईलिदै जान्छ, यसै त मन नपरेको केटो अझ तालु पनि खुईलिएको देख्दा हजुरको मन अझै खिन्न होला कि भनेर यो चिठ्ठी लेखेको हुँ। घरोधर्म, यस्तरी तालु खुईलिने नै उमेर त भएको छैन, विश्वास गर्नुहोला। हेर्नुस् ससुरा बा, यो अरपको पानी साह्रै रुखो हुँदो रहेछ। यहाँ ५-६ बर्ष बिताउने हो भने तालु त चिल्लै हुने रहेछ। न पत्याए मेरा मित्र समुन्द्र जि लाई हेर्नोस्। म मात्र कहाँ हो र?? मेरा साथीहरूको पनि तालु खुईलिदै गएको छ, डल्लिलाई भनेर मेरो फेसबुकका फोटाहरू हेर्नोस त।
खैर, तालु हेरेर ज्वाई बुढो पर्यो नभन्नु होला। मिले सम्म म यही मङ्सिरमा आउने छु। डल्लिलाई घरको कामकाज सिकाउनु होला। हजुरले माने पन्चे बाजा बजाएर ब्या गरौँला नत्र हाम्रो कुरो छदै छ।
उही हजुरको हुनेवाला डोरीलाउरे ज्वाईँ,
सभार : http://krishol.com.np
Labels: Fun, नेपाली खित्त्का, साहित्य